सुरबिर पन्डित दारी बा लाई ज्युदै श्रद्धाञ्जली लेख्ने को हो? रिसले आगो हुँदै मिडियामा Surbir pandit - NaulooDhun
सुरबिर पन्डित दारी बा लाई ज्युदै श्रद्धाञ्जली लेख्ने को हो? रिसले आगो हुँदै मिडियामा Surbir pandit
June 17, 2021 adminLeaveaComment on सुरबिर पन्डित दारी बा लाई ज्युदै श्रद्धाञ्जली लेख्ने को हो? रिसले आगो हुँदै मिडियामा Surbir pandit
अहिले मेलम्ची बजार जलमग्न अ’वस्थामा छ।अविरल वर्षाका कारण मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण अहिलेसम्मको विवरणमा ३१ जना बेपत्ता भएकाा छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धु’पाल्चोकका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाका अनुसार १६ जना बेपत्ता भएको पुष्टि भएको छ भने सात पुरुषको श’ब फेला परेको छ । अन्य १५ जना अझै बेपत्ता छन् ।
मेलम्चीको यो कहालीलाग्दो दृ’श्य हेर्नको लागि धेरै मानिस हरू जम्मा भइरहेका छ्न्। पिडीतका,आफन्त लगायत टाढा,टाढाबाट आएका मान्छेहरू यतिबेला त्यहाँ पुगेर क्षति को अवलोकन गतिरहेका छन्।कोहि कोहि खाद्यान्न,लत्ता कपडा आदि लिएर सहयोगका लागि गइरहेका छन्।बाढीले घर मात्रै नभएर खेतीयोग्य जग्गा समेत बगाएर लगेको छ।मेलम्ची बजारको त्यो दृश्य अहिले बगरमा परिणत भएको छ।मानिसहरू आउनेजती र सोध्ने जति मानिसहरूलाई आफ्नो घर,जग्गा र बगाएको सम्पत्ति बारे भनिरहेका छन्।अबको विकल्प भन्नुबाहेक केही नै छैन।
यतिखेर मेलम्चीमा मंग’लबार रातिदेखिको बाढीले सयवटा भन्दा बढी घर पूर्णरुपमा डुबानमा परेका छन् भने डेढ सय भन्दा बढी घर आंशिक डुबानमा परेका छन् । मंगलबार साँझ नै बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि ठुलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको छ । बाढीको भीषण रुप मंगलबार मध्यरातमा देखिएको थियो । यद्यपि साँझदेखि नै बाढी आउने सूचनाका आधारमा स्थानीयवासी सु’रक्षित स्थानतर्फ लागिसकेका थिए । उक्त बाढीकै कारण सानाघर पुरिएका छन् भने ४ तला सम्मको घरमा ३ तलामा पुरै लेदोले भरिएको छ भने एक तला भने देखिएको भन्दै एक स्था’नीयले बताएका छन् ।
बाढी–पहिरोबाट मेलम्चीका करिब पाँच सय जना वि’स्थापित भएका छन् । तीन सय जनालाई नेपाली सेनाको क्याम्पमा र २ सय जनालाई इन्द्रेश्वर माविमा राखिएको छ । उनीहरुलाई सोही स्थानमै बुधबार बिहानको खाना खुवाइएको छ । मानिसहरुले आफ्ना घरका सामान क्याम्पमा सारिरहेका छन् । विस्थापित भएकाहरु सुर’क्षित स्थानको खोजी गर्दै अग्ला डाँडामा गएर बसेका देखिन्छन् । बाढीले घर भत्काएपछि पीडितहरु बिलौना गरिरहेको सुनिन्छन् भने कतिपय सम्पर्कबिहीन समेत रहेका छन् । आफ्नो धन’सम्पत्ति खोलाको बगरमा परिणत भएपनि अब कसरी दैनिकी चलाउने भन्ने चिन्तामा उनीहरु डुबेका छन् ।
बाढीले कृषि भवन, आयुर्वेद भवन, कभर्ड हल, सिटी पार्क लगायतका भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । दुईवटा पक्की र दुई झोलुङ्गे गरी चार वटा पुल बगेका छन् । अहिले पनि पानी परिरहेकाले स्थानीय त्रसित छन् । खोज तथा उ’द्धारका लागि नेपाली से’नाको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ । अर्को एउटा निजी हेलिकप्टर पनि सि’न्धुपाल्चोक क्षेत्रमा खटिएको छ । स्थलगत रुपमा पनि नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको टोली परिचालित छ ।मंगलबार साँझ मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको बाढी–पहिरोका कारण हालसम्म सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । केही घाइतेहरुलाई काभ्रेको धुलिखेल अ’स्पतालमा पठाइएको छ
जिल्लामा व्य’वस्थापन र उ’द्धारका लागि आज नेपाली सेनाको तिन वटा हेलिकोप्टर आएका छन् । विपत्तिबारे गृह मन्त्रालयबाट खाद्यान्न, त्रिपाल, टेन्ट र स्लिपिङ ब्या’गलगायतका सामग्रीको व्य’वस्थापन भएको छ । थप उ’द्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग स्वास्थ्य तथा ज’नसङ्ख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले छलफल गर्नुभएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै अविरल वर्षाले मेलम्ची नदीमा बाढी आउँदा हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बा’थानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत नि’र्माण कम्पनीका कर्मचारी घाइते भएका छन् भने आयोजनाका सं’रचनाहरु डुबानमा परेका छन् ।बाढीका कारणले अहिले आयोजनाको सं:रचनामा कति क्षति पुग्यो भन्ने प्रारम्भिक अनुगमनबाट विस्तृत जानकारी आउन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यहाँका स्थायी सं’रचना पानीभित्रै भएपनि आफ्नै ठाउँमा भएको र अहिलेसम्म सं’रचनामा धेरै क्षति भएको नदेखिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हेलिकोप्टरबाट खिचेको फोटोमा संरचना नभत्केको पाइएको छ । नदी बढेकाले ‘हेडवर्कस्’ लगायत सं’रचना अहिले पानी मुनि रहेका छन् ।
आ’योजनामा नि’र्माणस्थलमा कार्यरत केही बेपत्ता भएको र केही घाइते भएको जानकारी आएको प्रवक्ता पन्तले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीका कति क’र्मचारी बेपत्ता भए वा कति घाइते भन्ने यकिन नभएकाले बुझ्न प्रयास भइरहेको आ’योजनाले जनाएको छ । घा’इतेहरुलाई उ’द्धार गरी उपचारका लागि धुलिखेल र काठमाडौँ पु¥याएको छ ।
अत्याधिक वर्षाका कारण नदीको तह बढेको भएपनि त्यहाँ रहेका संर’चनाको बाढी आउनुमा भूमिका नभएको आ’योजनाले जनाएको छ । कतिपय स्था’नीयबासीमा सुरुङ परीक्षण शुरु गरेकै दिनबाट बाढी गएकाले पनि आयोजनाको पानी मेलम्ची नदीमा खसालेको बुझाइ छ । प्र’वक्ता पन्तले भने आयोजनाको मे’लम्चीपट्टिको ढोका बन्द गरिएको र सुन्दरीजलबाट पानी खाली गरिएको जानकारी दिनुभयो । अधिक वर्षाले नदीमा तह बढेकाले हेलम्बु गाउँपालिका, मे’लम्ची नगरपालिका र त्यस आसपासका पालिकामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ ।यसै विषयमा तयार पारिएको भिडियो हे’र्नुहोस।
अवलोकन गर्न आएका मानिसहरूलाई परैबाट आफ्नो घर,जग्गा देखाउँदै पि’डीतहरू , भन्छन् आफ्नै घर पुग्न पनि सपना जस्तै भएकोछ!!(भिडियो सहित हे’र्नुहोस्)
एकाबिहानै हेर्नुहोस्, सिन्धुपाल्चोकमा राहात वितरणमा डरलाग्दो झ’डप, दुःखमा मलाम लगाउने बहानामा यस्तो.
यु,वतीको कु,मा,री,त्व प,रिक्षण गरेर छा,त्रवृति दिने अनौठो स्कु,ल
३ बर्षपछि निर्मलाको ह, त्या रा प’त्ता लाग्यो, अब छिट्टै सार्वजनिक गर्दै.
कतार प्रहरीमा भर्ना भएर केही वर्षमा नै जीवनमा कायापलट ल्याउँदै घर गाडी जोड्न चाहानुहुन्छ ? हजारौँ नेपालीहरुलाई लिने भयो कतार प्रहरीले ? कसरी हुने भर्ती ?